बलात्कारकाे चिरफार – Nepal Reports
जमिन रार्इ , २६ भदाै
अाज पनि पत्रिका पढ्नुभयाे हाेला, न्युज स्क्राेल गर्नुभयाे हाेला, देश दुनियाकाे खबर सुन्न र दैनिक दिमागी खुराक खाेज्न तपाइका अाँखा र कान अातुर थिए हाेलान् । अनि अाज पनि पक्कै कतै सामाजिक संजालकाे वालमा वा पत्रिकाका पानामा बलात्कारकाे समचार हेर्नु भयाे हाेला । पछिल्लाे समयमा बलात्कारका हेडलाइनहरू छ्याप छ्याप्ती छरपस्टिएका छन् । तपार्इलार्इ वाक्क लागिसकेकाे हाेला पत्रिकाकाे कुनामा वा फ्रन्ट पेजमै यस्ता समचार देखेर । पत्रकारिताकाे काम समाजमा भएका घटनालार्इ उदाङ्गाे गर्नु हाे । पत्रिकाले अाफ्नाे दायित्व निर्वाह गरेकाे छ । तर हरेक दिन जस्ताे बलात्कारकाे समाचार छापिँदा पत्रिकाका पानाहरू पनि सरमले मुख छाेप्ने स्थिति बनेकाे छ ।
मानब मुल्य र मानवताकाे परिचय हराउँदै गरेकाे स्थितिमा हामी फेरी जंगली बन्दै त छैनाैँ ? प्रविधि र सूचनाले दुनिया कहाँ पुगेकाे छ ? तर दिनहुँ जस्ताेकाे यस्ता समचारले हाम्रा सबै उपलब्धिलार्इ लाज र घिनले छाेपिदिएकाे छ ।
याे लेख घटनाहरूकाे जानकारी हाेइन, घटनाकाे चिरफार हाे, बलात्कारकाे चिरफार हाे । याे लेखकाे उदेश्य यसकाे अन्त सम्म पुग्दा बलात्कार जस्ताे जघन्य र अमानविय घटनाकाे समाधानरूपी ठाेस् निष्कर्ष निकाल्नु हाे । लेखले उदेश्य पुरा गर्याे गरेन पाठककाे हातमा छाेडिएकाे छ ।
के हाे बलात्कार ?
बलात्कारकाे ठेट अर्थ बल पूर्वक गरिने कुनै पनि काम हाे । उच्चारणमा अप्रभंस भएजस्तै अर्थ पनि अप्रभंस भएकाे उदाहरण हाे बलात्कार । अर्थ अप्रभंस हुँदै बलत्कार भनेकाे बलपूर्वक कसैलार्इ याैनजन्य काम गराउन बाध्य तुल्याउनु भएकाे हाे ।
यसलार्इ पनि सुक्ष्म रूपले हेर्ने हाे भने बलात्कार एक राेग हाे । मनाेराेग । कुनै पनि जघन्य अपराध गर्न कि त उच्च मनाेबल हुन पर्छ या मानसिक रूपले राेगी । एक सामान्य व्यक्ति वा मनस्थिति भएकाे व्यक्तिले जघन्य अपराध गर्न सक्दैन ।
बलत्कारी र बलत्कृत यहि समाजका पात्रहरू हुन् । त्यसैले हामीले अाँखा बन्द गर्नु हुन्न, कान बन्द गर्नु हुन्न, अावाज बन्द गर्नु हुन्न अनि दिमाग बन्द त पटक्कै गर्नु हुन्न । हरेक नेपाली बलात्कार बिरूद्ध बाेल्नु पर्छ र साेँच्नु जरूरी छ यस बिषयमा । ताकी टाढाकाे कुरा भाेली अाफैले भाेग्न नपराेस् । साेँच्न जरूरी छ कारण के भनेर अनि खाेज्न जरूरी छ यसकाे सामाधान । बनाउँन जरूरी छ स्वच्छ समाज । सभ्य समाजकाे भविष्य हाम्राे वर्तमानकाे साेँच र सत्कर्मबाट मात्र सम्भव छ ।
पाँच महिना अघि मात्र सप्तरी जिल्लामा १३ वर्षीया बालिका पार्वतीकुमारी मण्डललाई बलात्कारपछि हत्या गरिएकाे थियाे ।
छानबिनकाे क्रममा एसपी मुकेशकुमार सिंहले भनेका थिए ‘सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेर मात्रै बलात्कार नियन्त्रण गर्न कठिन छ,’ । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने प्रहरी प्रशासन हरेक बलात्कार नियन्त्रण गर्न असमर्थ छ । प्रहरीले अाफ्नाे शीप, प्रविधि र जनसक्तिले भ्याइन्जेल अपराध राेक्न प्रयास गरेपनि सबै ठाउँमा हरपल प्रहरी तैनात हुन नसक्ने कुरा सबैलार्इ थाहा नै भएकाे कुरा हाे । एसपी सिंहकाे कुरा त्यसरूपले सहि हाे । बलात्कार जस्ता अपराधलार्इ न्युनिकरण गर्न वा राेक्नका लागि जनस्तरमै यस विषयमा जागरण ल्याउन नसके यसले अझै भयावह रुप लिने कुरा पनि एसपी मुकेशकुमार सिंहले राखेका थिए ।
महोत्तरीको औरही नगरपालिका १ मा ८ महिने बालिका अपहरण हत्या भयाे, बलात्कारकाे पनि अासंका गरिएकाे छ । यस्तै, छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा दुई वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा छिमेकी १२ वर्षीय बालक पनि प्रहरी नियन्त्रणमा छन् । यसरी ८ महिने दुधे बालिका देखि ८० बर्षिया बृद्धा सम्म बलात्कारमा परेकाे डरलाग्दा सूचीहरू छन् । समयमै राेकथाम नगरे याे राेगकाे सूची बढ्दै जाने पक्का छ ।
काे र किन हुन्छन बलात्कृत ?
बलात्कार जस्ताे जघन्य अपराध गर्नुकाे पाछाडीकाे कारण एकै हुँदैन । काम वासना प्रमुख रहे पनि, प्रतिशाेध, अज्ञानताकाे कमी, मानसिक स्थित या अन्य पनि हुन सक्छ । महिला मात्र बलात्कारमा पर्ने कुरा सत्य हाेइन । पुरूष पनि बलात्कारकाे सिकार हुन्छन् । तर समाजका निर्दाे, असाहाय, दुर्वलहरू नै बढी उत्पिडनमा परेका छन् । याैन उत्पिडनकाे पक्षमा पनि त्यहि कुरा लागु हुन्छ । त्यसै कारण हुन सक्छ प्रतिकार गर्न नसक्ने महिला र न्यून अार्थिक स्थिति भएकाहरू याैन उत्पिडनमा परेका र बलात्कृत भएका धेरै घटनाहरू सुनिएकाे । याैन उत्पिडन कसैलार्इ जिस्क्याउने, अाखाँ झिम्क्याउने जस्ता गतिविधी मात्र साेँच्छाैँ हामि । तर कसैलार्इ गलत तरिकाले हेर्नु वा कसैकाे बारेमा गलत तरिकाले साेँच्नु पनि याैन उत्पिडन हाे, एककिसिमकाे बलात्कार नै हाे जसलार्इ मानसिक बलात्कार भन्न पनि सकिन्छ । याैन उत्पिडन नै बलात्कारकाे बीज भएकाे कारण नै सुधार यहिँबाट सुरू हुनु पर्छ ।
काे काे कहाँ कहाँ चुके त ?
एक कक्षा बाट प्रसंग जाेडाैँ एक शिक्षकलार्इ विद्यार्थीले प्रश्न गर्छ “गुरू बलात्कार भनेकाे के हाे ? के बाबाले अामालार्इ गरेकाे पनि बलात्कार हाे?” यस्ताे प्रश्न सुनेर सिक्षकले विद्यार्थीलार्इ तथानाम गाली गर्छन् । उसकाे अनुसासनमा प्रश्न गर्छन् ।हदै लचिलाे भए पनि “याे प्रश्न पाठसंग मेल खाएन । किताबकाे कुरा मात्र साेध्ने” भनेर टार्छन् । विद्यार्थीकाे मनमा काैतुहल जाग्नु स्वाभाविक हाे, प्रश्नकाे उचित जवाफ दिइनु पर्थ्याे, दिइएन । याे एक उदाहरण मात्र हाे हाम्राे शिक्षा स्थितिकाे । विद्यालय नै त्याे ठाँउ हाे जहाँ याैन शिक्षा वा वयस्क शिक्षा सिकाउन पर्छ । विद्यालयले नै भाेलीका असल र सभ्य व्यक्ति जन्माउने थलाे हुन पर्ने हाे । तर त्याे हुन सकिरहेकाे छैन । त्यहा हामि चुकिरहेका छाैँ ।
राज्य, प्रहरी प्रशासन
सुसासन कायम गर्ने राज्य, प्रहरी प्रशासनले हाेइन, सुसान त व्यक्तिले कायम गर्ने हाे । व्यक्ति नै समाजकाे तन्त्र हाे । राज्यले त मात्र प्रणाली निर्माण गर्ने हाे । हाम्रा कानुन नीति नियम उत्कृष्ट छन् , प्रणालीमा खाेट लगाउने ठाँउ छैन । त्यहि प्रणालीलार्इ संचलन र व्यवस्थापन गर्ने काम मात्र हाे राज्य, प्रहरी प्रशासनकाे । व्यवस्थित रूपले सुसान कायम भए नभएकाे हेर्ने, सचेत गराउने, गल्ति गर्नेलार्इ सजाय दिने काम राज्य, प्रहरी पशासनकाे भए पनि कर्ता त हामी नागरिक हाैँ, व्यक्ति हाैँ ।
प्रहरी र सासन गर्ने पनि एक व्यक्ति नै हाे । याे अर्थमा लिने हाे भने राज्य वा प्रहरी प्रशासन पनि चुकेकाे छ की ? याे चाँहि अनुसन्धानकाे अर्काे विषय हुन्छ ।
समाजिक संरचनाकाे पनि दोष छ । जब एक छाेरी बलात्कृत हुन्छिन् परिवारले साेँच्ने याे पनि हाे कि अब छाेरीलार्इ कसले बिहे गर्छ …. समाजमा के मुख देखाउने ….. । कुनै घटनामा त यस्ता घटनालार्इ पिडक र पिडित मिलेर ढाकछाेप पनि गरिएकाे छ । यस्ताे हुँदा पिडककाे मनाेबल बढ्छ र घटना घटिनै रहन्छ ।
बलात्कारका समचार धेरै छापिएका छन् । याैन शिक्षाका समचार कति छापिएकाे छ त ? यस्काे उत्तरबाट थाहा हुन्छ कि मिडिया कहाँ चुक्याे । इन्टरनेटकाे प्रयाेग सँगसँगै ज्ञानका अथाह श्राेत अाए पनि मानिसले त्यसलार्इ सहि सदुपयाेग गरेनन् । उदाहरणकाे लागि युट्युब लार्इ नै लिअाैँ । युट्युबमा भाइरल हुने वा ट्रेन्डिङका भिडियाे हेर्दा कि त उत्सृङ्खल हुन्छन् कि मनाेसञ्जनात्मक मात्र । ज्ञानमूलक भिडियाे कतै देखिन्न । मिडिया र सामाजिक सन्जाललार्इ शिक्षाकाे बलियाे माध्ययम बनाउन सकिन्थ्याे । तर हामि त्यहाँ चुक्याैँ
घर परिवार प्रथम विद्यालय हाे । परिवारले छाेराछाेरीलार्इ मानविय शिक्षा, नैतिक मुल्य र मान्यताकाे पाठ सिकाउनु पर्छ । नराम्रा कुराकाे प्रतिकार गरिहाल्ने शिक्षा हाम्राे समाजमा प्रचलनमा छैन, त्याे पनि परिवारले नै सिकाउन पर्छ । अाफ्नाे छाेराछाेरीलार्इ पाठ कम पैसा र गाली धेरै दिनाले पनि उनिहरू कुकाम गर्न थाल्छन् भन्ने कुरा हेक्का राख्नु पर्छ । कति परिवारले यि सबै कुराहरू व्यवहारमा उतार्छन् कतिले उतार्दैनन् । अाफै साेँच्नुहाेला तपार्इ र तपार्इकाे परिवार त यहाँ चुकिरहेका छैनन् ?
विषय बस्तुकाे उठान गरेपछि निष्कर्ष वा सामाधान पनि पस्किनु पर्छ । समाधानकाे संकेत माथि पनि अार्इ सकेकाे छ । त्यसैले सामाधान बुँदागत रूपमा पस्किन्छु ।
याैन उत्पिडनमा पर्नु साथै उजुरी गर्नु पर्छ पिडित र पिडक बिच अाफै मिलाउने कामलार्इ प्राेत्साेहान दिनुहुन्न
यौन शिक्षालाई परिवार र विद्यालयले खुलेर सिकाइनुपर्छ
कसैले मानसिक बलात्कार गरेमा खुलेर बिराेध गर्नु पर्छ
बलात्कारीलाई सजिलै उन्मुक्ति मिल्ने खालका लुप्ती (loophole) वा फितलो एेन कानुनलार्इ परिमार्जन गर्नुपर्छ
बालककाे यौन जिज्ञाशालाई सहज रुपमा सहि जानकारी खुलेर दिनुपर्छ
केटिहरू अात्मारक्षात्मक ज्ञान सिक्कार्इ अात्मामनाेबल बढाउने बाताबरण बनाउनु पर्छ
समयकाे बदलाब सँगसँगै धेरै प्रकारका अाश्चर्यलाग्दा घटना घट्छन् , समस्या देखा पर्छन् । समस्याबाट भाग्नु सामाधान हाेइन् । यसलार्इ छलफल गरिनु पर्छ । राेकथामकाे विचार विमर्श गरिनु पर्छ । नकरात्मक समचारका विपक्षमा बाेल जवाबी हमलारूपी लेखहरू लेखिनु पर्छ । याे लेखकाे पनि उदेश्य छ । उदेश्य पुरा गर्याे गरेन तपार्इकाे प्रतिकृया बाट जान्न पाऊँ ।